Waxa Iman Doona Ururo Laga leeyahay Masar, Talyaaniga Iyo…, Ninka weyn Ee Siyaasiga Ah Ee Iminka Baraarugay Waxba Masoo Sido Oo…, Reer Djiboutina Ku Canaanmayno…, KULMIYENA Buudhiga Ayaanu Fuushanahay…. | Araweelo News Network (Archive) -
Waxa Iman Doona Ururo Laga leeyahay Masar, Talyaaniga Iyo…, Ninka weyn Ee Siyaasiga Ah Ee Iminka Baraarugay Waxba Masoo Sido Oo…, Reer Djiboutina Ku Canaanmayno…, KULMIYENA Buudhiga Ayaanu Fuushanahay….
Waraysi khaas ah Gudoomihii Isbedel doonka UDUB Axmed Sandoon
images/stories/3.jpg Hargeysa(ANN) “Sida aad ka garato magacayaga waxaanu ahayn isbedel doon, isbedelkiina waanu helay oo xukuumadii way dhisantay, waanu jeclayn in xubno naga mid ahi ka dhex muuqdaan, taasna waanu filaynaa oo samirkeeda ayaanu leenahay, maadaama aanay xukuumadii weli dhamaan, waana
filaynaa inaanu meel uun ka muuqano ilaa weli may dhamaane. Anaguna isbedel doon ahaan waxaanu ku milanay oo ka maidnahay oo la jaanqaadanaynaa iminka wixii ka danbeeya xisbigii Kulmiye. ” Sidaa waxa yidhi xildhibaan Axmed Sandoon Xasan oo ka tirsan golaha deegaanka Hargeysa, isla markaana ahaa gudoomiyihii garabkii labaxay isbededel doonka xisbigii UDUB, balse markii danbe 21 April 2010. ku biiray xisbiga Kulmiye.
Mr. Sandoon wuxuu sidaa ku sheegay waraysi khaas ah uu maanta magaalada hargeysa ku siiyay shebekada wararka ee Araweelonews oo wax ka weydiisay halka uu ku danbeeyeen isbedeldoonkii uu hogaaminayay iyo sida uu u arko xaalada siyaasada ee waqtigan xukuumada Madaxweyne Axmed Siilaanyo. Sidoo kale waxa la weydiiyay mawduuca mudo kordhinta, aragtidiisa furashada ururada siyaasadeed iyo arrimaha mudooyinkii u danbeeyay la hadal hayay ee Maxrajka Karantiimada xoolaha iyo isgaadhsiinta keybalka Badda.
Wuxuuna isagoo ka hadlaya arrimahaa yidhi, “Labada arrimood ee Maxjarka iyo Keybalka aad ayaan usoo dhowaynayaa go,aanka uu ka qaatay Madaxweynuhu, waana soo dhowaynayaa, basle waxaan kula tilin lahaa qoloda qaadatay keybalka inay sheer bixiyaan oo weliba qoladii ay is dhinacyaacayeen ay sheer siiyaan, taas oo ah mid dalka iyo iyagaba wax u taraysa. Go,aanka Maxjarkana mar haddii uu dhismay oo Abu Yaasir wuxuu doono ha ahaadee ay dad muwaadiniin ahi ku ladhnaayeen. Haddii labada maxjar iska dhinac furnaadaan oo labada dawladu maamusho sida Madaxweynuhu ka dhawaajiyay waxaan qabaa inay tahay arrin fiican oo go,aankeeda uu qaatay, markaa labadaa arrimood waxan u arkaa sidaa.”
Mar la weydiiyay Mr. Axmed Sandoon maadaama uu Djibouti aqoon u leeyahay sida uu u arko siyasaada waqtigan ee Djibouti iyo inuu ka rajo qabo inay wax iska bedelayaan xiliga xukuumada Somaliland ee maamulka cusub, wuxuuna isagoo arrintaa ka hadlaya yidhi, “Reer Djibouti ku canaanmayno maxay intaas oo dhan soomaali weyn u raadinayeen oo dawlad jirtay ahayd xaqna way u lahaayeen. Laakiin waxba way kasuurtoobi waayeen, waqtigana waxaaba la sheegayaa Shariif iyo Raysal wasaarihiisii oo is haysta, markaa maanta Djibouti maalin ay uga wanaagsan tahay,maalin ay uga haboon tahay cid alaale cid ku qabsanaysaana ma jirto, haday citiraafi lahayd Somaliland, mana buurna rajada aan anigu ka qabaa. Laakiin waan jeclaan lahaa inay maanta wixii hore wax ka bedelaan oo ay xaqiiqda ku shaqeeyaan oo haday soomaali weyndoonayaan, halkii loo mari lahaa somaliweyn waa halkane inay Somaliland citiraafaan. Dhawr iyo toban shir ayaa soomaali loo qabtay inat badan Djibouti ayaa qabatay, laakiin waxba waa ka suurtoobi waayeen. markaa inay meel kaga dhegto maahee haday sooomaali rabaan oo ay dhab ka tahay inay maanta halkan dib usoo eegaan oo yidhaahdaan, “haday halkaa waxba ka suurtoobi waayeen, bal aynu halkan daba qabatayno iyaga ayay u fiicnayd bulshada Somaliland iyo ta Djibouti ayay u fiicnayd, mustaqbalka labada ummadood ayay u fiican tahay Fulow Guuli kuu dhowaydaa ayaa la yidhi, maanta cid ku qabsanaysa oo odhanaysa maxaa u citiraafteen ma jirto”.
Xidhibaan Axmed Sandoon, waxa kaloo la weydiiyay aragtidiisa mudo kordhinta golaha guurtida iyo waxa ka jira inay xildhibaano golayaasha deegaanka ee uu ka midka yahay iyo kuwa wakiiladu ku lug lahaayeen mudo kordhinta, isagoo yidhi, “in la kordhiyo mudada daruuri ayay ahayd. Laakiin mudada aad ayay dheereeyeen, tusaale ahaan golaha wakiilada, guurtiduna dastuuriyan iyadaa iska leh mudo kordhinta, balse waxa meesha taala inay talada badsadaan oo eegaan mudadii komishanka iyo xisbiyada. Maalmahan waan arakayay iyadoo saxaafada aad loogu dhaleecaynayo mudo kordhinta, Guurtiduna dhinacba maalin ayay ka qoslinay oo dhinocoodii u raacaysaa. Markaa maaha guurtida uma qabo sidaa, way ku jiraan guurtida dad aanan maalin iyo toban maalmood usii daayeen oo farabadan oo iska daba socod ah. Laakiin maqaamkooda guurti ahaan may ahayn inay tixgeliyaan kaanbeyn ee waxay ahayd inay caqligooda ugu taliyaan dalka.”
Wuxuuna isagoo ka hadlaya furashada ururada siyaasadeed iyo aragtidiisa yidhi, “anigu waxan qabaa waxan ahaa raggii damaca lahaa gudoomiyihii isbedel doonkii UDUB ee doonayay inuu iska sharaxo xisbigii UDUB oo aan kusoo tabcay, waatii albaabada nalaga xidhay, cid maanta Urur iiga baahi badni ma jirto. Maadaama UDub-na sidaa nalaga yeelay, Kulmiyena ka mid ayaanu nahay. Laakiin Buudhiga ayaanu fuushanahay, marka la eego danta qaranka arargtidayda waxan qabaa in aan maanta lagu degdegin furahsda Ururo siyaasadeed, sababo badan awgood. Waxaana qabaa in doorashada golayaasha deegaanka ee u horaysa lagu galo sadexda xisbi ee jira. Shantaa sanadood ee Odaygu (Axmed Siilaanyo) joogona citiraaf la raadiyo ee insha allaa la helo wuu dhowyehee, wixii ka danbeeya ee aynu ka talaalano fadqalalo debedeed ee ka bogsano inaynu Ururo furano waynu yeeli karaa. Laakiin anigu waxan qabaa waqtigan xaadirka ah Ururo aynu furanaa dhib ayay inoo keenayaan.”
Mr. Sandoon oo fasiraad ka bixinaya faragelinta iyo khatarta uu tilmaamay ee gaboodka u noqon kara furashada Ururada siyaasadeed, waxa uu yidhi, “anigu waxaan ahaa dadkii Ururada furtay may jirin cid berigaa Ururadeena fara gelisay oo debedeed, waxaanu ahayn dad col moog ah. Laakiin markii doorshadii madaxtooyada 2003, aynu ka baxanay waxaanu ogaanay inaynu siganay ilaa ma nihin dawlad la citiraafsan yahay oo haday xagal daacdo loosoo gurmanayo oo sidaa xataa xamar loogu gurmanayo laguugu soo guraman maayo ee hayna daayeen ayaa la odhanayaa. markaa waxan qabaa inay furashada Ururada siyaasadeed kusoo dhuumanayaan cadawga Somaliland oo doorkii hore islahaa iyagaa isku jabaya. Damaca raggu wuu ku dhashaa ee waxa imanaya Ragg badan oo damac lagu soo afuufay oo laga danbeeyo oo lacag la daba sido. Ururo dulqaadan doonaana ma jirayaan, kuwii hore Lix Urur ayaanu ku galay doorashadii sadexna way heleen sadexna waanu ku dhacnay. Waxana aaminsanahay inay lixdii urur ee doorashadii hore galay ahaayeen muwaadiniin rasmi ah. Laakiin waxa iman doona miday Masar leedahay, mid talyaanigu leeyahay mid meelahan kale ee dhow laga leeyahay oo lacag la daba sido.
Anigu waan jeclaa in mar la tartamo. Laakiin Ninkii siyaasad danaynayay Lixdii sano wuu joogay, ka iminka soo dhashaana waa inuu kuwan jira dabada ka raaco. Ninka weyn ee siyaasiga ah ee iminka soo baraarugay waxba masoo sido, doorkii hore ayay ahayd inuu siyaasada dhiniciisa ka raaco ama ha guulaysto, ama ha hadhee.” Ayuu yidhi Mr. Sandoon.